एसईई सकेका विद्यार्थीलाई टिप्स : कसले कस्ता विषय पढ्ने ? - नयाँपुल अनलाइन डटकम
एसईई सकेका विद्यार्थीलाई टिप्स : कसले कस्ता विषय पढ्ने ?
प्रकाशित मिति : Tuesday, July 2, 2019 nayapulonline
-प्रा. डा. मनप्रसाद वाग्ले, शिक्षाविद्
परीक्षा र नतिजा नियमित प्रक्रिया हुन् । केही दिनअघि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा आइसकेको छ र विद्यार्थीको हातहातमा नतिजा पुगिसकेको छ । जिपिए ०.८ देखि ४ सम्म ल्याउने विद्यार्थी रहेका छन् । जिपिएमा नतिजा दिएकाले ३.६ आएकाले ए भन्ने कि, ए प्लस भन्ने अन्योल रहेको पाएको छु । जिपिए ३.६ भनेको ग्रेड पोइन्टको औसत अंक हो । अक्षरमा दिने ए, बी, सी, डी भनेको उच्चतम सीमा हो । हाम्रोमा ८० देखि माथि र ९० भन्दा कमलाई ए ग्रेड दिइएको छ । ९० र १०० बीचमा आउनेको ए प्लस त हुन्छ तर ए प्लस ल्याएकाको १०० प्रतिशत हुँदैन । ए प्लस लेख्नेबित्तिकै उच्चतम बिन्दु संकेत गर्दछ । ए प्लस भन्नु र मेरा छोराको १०० प्रतिशत आयो भनेर दाबी गर्नु फरक कुरा हो ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना छोराछोरीको ए प्लस आयो भन्ने देखिन्छ, सरकारले नै ए प्लस दिएको छैन, कसरी आउँछ ए प्लस ? औसतमा दिएको अंकले कुन क्याटेगोरीमा परेछु भन्ने हो । आउटस्ट्यान्डिङ, एक्सेलेन्ट, भेरी गुड, गुडलगायत नौवटा व्याख्या गरेको छ । म कहाँ परेछु भनेर बुझ्नका लागि त्यो राखिएको हो । यसमा अन्योल देखिएको छ । स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
ग्रेडिङको मुख्य उद्देश्य म कुन विषयमा राम्रो र कुन विषयमा कमजोर छु, कुन विषयमा कति रेन्जमा पर्छु भनेर देखाउने हो । ग्रेडिङको अर्थ ३२ आए पास र ३१ आए फेल भनेको होइन । पहिले ६० आउनु भनेको के हो, ८० आउनु भनेको के हो भनेर व्याख्या थिएन । हिजो ३१ ल्याउने किन फेल हुन्छ, ३२ ल्याउने किन पास हुन्छ कसैले जवाफ दिन सकेको थिएन । आज कुनै ३.६ भन्दा माथिको जिपिए ल्याएको छ सबैभन्दा माथिको रेन्जमा प¥यो भन्ने व्याख्या हुन्छ । कुनै विद्यार्थीले ए प्लस ग्रेड ल्याएको छ भने त्यो विषयमा ऊ आउटस्ट्यान्डिङ छ भन्ने बुझाउँछ । ग्रेडिङले कुन विषयमा त्यो विद्यार्थी कहाँ रहन्छ, कुन विषयमा अब्बल छ, कुन विषयमा मेहनत गर्न बा“की छ, त्यो विद्यार्थीको विषयगत विवरण बोल्छ ।
कुन विषय कहाँ जाने ?
आउटस्ट्यान्डिङ, एक्सेलेन्ट, भेरी गुड, र गुड यो चारवटा मापदण्डभित्रको नतिजा म्याथ, साइन्स, इंग्लिस र नेपालीमा आएको छ भने उसको झुकाव साइन्समा भएमा साइन्समा जान सक्छ । इंग्लिस र नेपालीमा पनि राम्रो भएकाले ऊ मानविकी तथा सामाजिक शास्त्रतिर पनि जान सक्छ । अभिभावकले विद्यार्थीको रुचि बुझेर त्यस क्षेत्रमा जान सहयोग गर्नुपर्छ । शैक्षिक संस्थामा आउनेलाई त्यहाँ पनि राम्रो काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ । मेरो विद्यालयमा राम्रो पढाइ छ, यहीँ आएर पढ भन्ने काउन्सिलिङ हुन्छ । आफ्नै कलेजमा भर्ना हुन बाध्य पार्ने काउन्सिलिङ गर्नु हुँदैन ।
साइन्स, म्याथ, इंग्लिस र नेपालीमा एसइईमा राम्रो नतिजा ल्याएको छ भने पहिलेको पृष्ठभूमिमा के बलियो थियो त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ । ९ कक्षाभन्दा अघि म्याथ साइन्सभन्दा भाषा राम्रो थियो भने एसइईमा ए वा ए प्लस आए पनि साइन्स पढ्न बल गर्नु हुँदैन । एसइईको नतिजाले मात्र उसलाई भोलि माथि उकास्दैन । विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा, साइन्स र प्राविधिक के पढ्ने भन्ने विकल्पहरू रहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्डमा प्राविधिक विषयमा जान पनि गणित विषयमा सी प्लस चाहिन्छ । म्याथमा सी प्लस भन्दा माथि छ, विज्ञानमा रामै छ, तर नेपाली, अंग्रेजी विषयमा त्यस्तो विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षामा राम्रो गर्न सक्छ । प्राविधिक विषयहरू पनि अरू साधारणसरह कक्षामा बसेर पढ्न मिल्ने बनाएको छ ।
सिटिइभिटी र कक्षा ११ मै प्राविधिक विषय पढ्न पाइन्छ । प्राविधिक विषय पढेर भोलि इन्जिनियरिङलगायतका क्षेत्रमा जान सकिने बाटो छ। यसअघिको तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले बनाएको मापदण्डमा सबैभन्दा कमजोर विद्यार्थी शिक्षामा जान पाउने बाटो बनाएको छ । हाम्रो देशमा कमजोरले शिक्षा पढेको र कमजोर व्यक्ति शिक्षक भएका कारणले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । तर, जो भोलि शिक्षामा परिवर्तन ल्याउन सक्छु र शिक्षक बन्ने मन भएका एसइईमा राम्रो नतिजा भएका व्यक्तिहरू शिक्षाका विषय पढ्दा हुन्छ । कमजोर शिक्षामा जानुपर्छ भन्ने छैन ।
व्यवस्थापनमा जानका लागि ३ वटा कुरा हेर्नुपर्दो रहेछ । व्यवस्थापनमा पनि कम्प्युटर, म्याथ र एकाउन्टमा राम्रो हुनुपर्छ । मैले कुन विषयमा कस्तो नतिजा पाए । राम्रो नतिजा पाएको विषय कक्षा ११ मा व्यवस्थापनसँग मिल्ने छ कि, साइन्ससँग छ वा मानविकी त्यसलाई छुट्याउनुपर्छ । एसइईमा पाएको नतिजा र विद्यार्थीको रुचिका आधारमा कक्षा ११ मा विषय छनोट गर्नुपर्छ । यो नितान्त विद्यार्थीको आफ्नो कुरा हो ।
भोलि म के बन्छु भन्ने १० कक्षा पास गरिसकेको विद्यार्थीको मनमा हुन्छ । चाहना र उद्देश्यलाई सहयोग गर्ने गरी नतिजा आएको छ भने राम्रो भयो, नभए उद्देश्य परिवर्तन गनुपर्ने हुन्छ । डाक्टर बन्ने इ्रच्छा हुँदाहुँदै पनि त्यो दक्षता नहुन सक्छ । आफ्नो चाहना र क्षमता बुझ्नुपर्छ । उद्देश्य ठूलै राख्नुपर्छ, तर विकल्प पनि सोच्नुपर्छ । चाहना राखौँ र क्षमतालाई अभिवृद्धि गरेर अगाडी बढौँ । पूर्वाधारको पाटो अहिले कक्षा ११ र १२ पढाउने करिब ३६ सय संस्था छन् । सामुदायिक विद्यालयसँग सम्बन्धित भएर ११ र १२ कक्षा चलेको छ । त्यहाँ राम्रो व्यवस्थापन हुन सकेको छ । एउटा शिक्षकको अनुदानको रकममा ४-५ जना आंशिक शिक्षक राखेर पढाएको छ । अहिले निजीमा अभिभावकलाई धेरै हाइफाई देखाएर विद्यार्थी ल्याउने प्रचलन छ ।
१६ वर्षे बच्चालाई ग्ल्यामरबाट प्रभावित हुनु स्वाभाविक पनि हो । कलेजको आवरण एउटा पक्ष हो, तर त्यस आवरणभित्र नपसी, नबुझी भर्ना हुनु हुँदैन । ठूलो भवन, ग्राउन्ड जसको छ उसको शुल्क पनि बढी छ । अभिभावकको क्षमता हेरेर शैक्षिक संस्था रोज्नुपर्छ । लहैलहैमा भर्ना गर्नु हुँदैन । ठूलो कलेजमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने लागे पनि आफ्ना अभिभावकको आम्दानीले पुग्दैन भने त्यो सोचाइलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । राम्रो पढाइ हुने सानो कलेज भए पनि फरक पर्दैन । आवरणभित्र छिरेपछि शिक्षकको अवस्था बुझ्नुपर्छ । जुन कलेजमा पूर्णकालीन शिक्षक छन् ती कलेजको गुणस्तर राम्रो हुन्छ । कुनै कलेजले हाम्रा सबै शिक्षक फुल टाइम भनिदिन्छन् । कसैले कोर्स कन्ट्र्याक्ट गरेर पनि फुलटाइम शिक्षक भनिदिन्छन्, यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । आंशिक शिक्षकलाई एक ठाउ“बाट अर्कोमा जानका लागि हतार हुन्छ, पर्याप्त समय र ध्यान दिन सक्दैन । त्यस्तो कलेज छान्नु हुदैन् ।
विद्यार्थी कलेज जानु भनेको पाठ्यपुस्तकमा साक्षर हुनका लागि मात्र होइन । एसइईसम्म पाठ्यपुस्तकभन्दा बाहिर लगेनन् । अब होराइजन ठूलो हुनुपर्छ । पाठ्यपुस्तक बाहेकका शैक्षिक, खेलकुद, मनोरञ्जनका कुरा के छन्, हेर्नुपर्छ । पाठ्यक्रमबाहेक भोलि राष्ट्रिय रूपमा चिनाउने कार्यक्रम के छन् भन्ने हेर्नुपर्छ । स्पोर्ट, म्युजिक, वक्तृत्वकला, लेखनकलालगायतका विषय हुनुपर्छ । यी कुरा छैनन् भने त्यो कलेजमा जानु हुदैन । कक्षाकोठाको व्यवस्थापन पनि हेर्नुपर्छ । विद्यार्थीहरू आवश्यकताअनुसार समूह छलफल गर्न मिल्ने खालको छ कि छैन हेर्नुपर्छ । कक्षामा प्रविधि र कक्षाकोठामा कस्ता कुरा लेखिएका छन् हेर्नुपर्छ । हामीले जति पढाएका छौँ इन्टेलेक्चुअल लर्निङ मात्र गराएका छौँ ।
अब इमोसनल (भावनात्मक) लर्निङ चाहिन्छ । यो उमेरका विद्यार्थी इमोसनलरूपमा स्थायित्व भएका हुँदैनन् । रिस, राग, भावना, प्रेम के हो ? यी विषयमा सकारात्मक भावना बनाउन सक्नुपछ, होइन भने यिनै विद्यार्थी भोलि कुलतमा लाग्छन्, बलात्कारी हुन्छन्, कक्षा बंक गर्छन् र यी विद्यार्थी भोलि अभिभावकका लागि पनि बोझ हुन्छन् । त्यसैले अभिभावकले पनि इमोसनल लर्निङ गराउने प्रतिबद्धता माग्नुपर्छ । ग्रुप वर्क, प्रोजेक्ट, समूहमा काम गराउने, एकले अर्काको प्रशंसा गर्ने, क्रिटिकल भएर इमोसनल लर्निङ गराउन सकिन्छ । प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि सहभागितामा सिकाउन सकिन्छ । सकारात्मक धारणा जगाउने योगा गराउन सकिन्छ । कक्षामा शिक्षकले पढाएको कुरा ‘डाटा कलेक्सन’ गर्न ग्रुपमा जान सक्छ । यस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । कलेजको इतिहास पनि हेर्नुपर्छ । उक्त कलेजबाट उत्पादन भएका जनशक्ति कत्तिको सक्षम छन्, शिक्षक कत्तिको सक्षम छन् यो कुरा पनि हेर्नुपर्छ ।
सफल हुनका लागि हामी सबै साक्षर हौँ । पाठ्यपुस्तक पढेर मात्र सक्षम भइँदैन । पाठ्यपुस्तक मात्र पढ्दा सिर्जना कहिल्यै माथि उठ्दैन । त्यसका लागि साहित्य पढ्नुपर्छ । फेसबुुकमा धेरै समय खर्च गरिरहनुको सट्टा इन्टरनेट प्रयोग गरेर आफ्नो शिक्षालाई सहयोग पुग्ने सामग्री खोज्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जाललाई पनि शैक्षिक उपलब्धिका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । आज शिक्षकले पढाएको कुरा नसुतेर भए पनि समीक्षा गर्नुपर्यो, पढ्नुपर्यो । नलेखीकन पढेको कुरा मस्तिष्कमा बस्दैन । पढ्यो भने दुई दिन बस्ला, लेखेको कुरा दुई हप्ता बस्छ । बिर्सियो भने लेखेको कुरा पल्टाएर हेर्न सकिन्छ । शिक्षकले पढाउँदा कतिपय निष्क्रिय भएर पढेको पाइन्छ । शिक्षकले पढाएको कुरा विद्यार्थीले नोट नगर्ने, शिक्षकले कक्षा पसेर लेखाइदिने गरेको पाइन्छ । शिक्षकले भनेको मुख्य बुँदा आफैँ लेख्ने, पाठ्यपुस्तक पढ्ने र नोट बनाउने गर्नुपर्छ । यसले सम्झना शक्ति बढाउनुको साथै व्याख्या गर्ने क्षमता पनि बढाउँछ ।
एसइई उत्तीर्ण भन्छन्– प्राविधिक क्षेत्रमा जान विज्ञान पढ्छु
पौवादुङमा गाउँपालिकामा भौतिक पूर्वाधाहरुको काम प्रभावकारी ढंगले हुदैं
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको भवन निार्माणाधिन अवस्थामा
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सपना साकार पार्दै चौदण्डिगढी नगरपालिका
स्थानीय सरकारको व्यवस्थापन पछि सुर्वण गाउँपालिकामा आमुल परिर्तन
भौतिक पूर्वाधारहरुको काममा परिर्वतन गाउँपालिका अघि बढ्दैं
विचारमा भन्दा विकासमा परिवर्तन आउने गरी नगरमा काम भइरहेको छ नगर प्रमुख ढुंगाना
जिल्लाकै समृद्ध गाउँपालिका बन्दै विश्रामपुर